पुरुष बेश्याको माग बढ्दै, यसकारण महिलाहरु रोज्छन पुरुष बेश्या onlinedarpan.com
Wednesday 20th of October 2021 / 12:52:27 AM
बेलायतकी ४२ वर्षीया शारलोटले पहिलोपटक पुरुष बेश्या (मेल एस्कार्ट) अर्थात जिगोलोको सुवा लिइन् तब यसको कारण निकै साधारण थियो, अर्थात कुनै पनि प्रकारको भ्रमबाट बच्नु । उनी भन्छिन्–केही वर्ष पहिला मैले पहिलो पटक पुरुष बेश्याको सेवा यौन चाहना पूरा गर्नका लागि लिएकी थिएँ । बीबीसी मुन्डोलाई उनले भनिन्–साथीबिना एक्लै रहेको नाताले कुनै पुरुषका साथ बाहिर समय बिताउने विचारले मलाई खासै सुहाउँदैन थियो।
उनका लागि यो नयाँ सवाल होइन कि यदि उनलाई सेक्स निःशुल्क प्राप्त हुन सक्छ तब उनले पैसा तिरेर सेवा लिनु किन आवश्यक छ ? उनी भन्छिन्–यदि कुनै व्यक्ति तपाईलाई मन पर्दैन भने तपाई अन्तमा उससँग सुत्न पनि चाहनु हुन्न तब भ्रम उत्पन्न हुन जान्छ । म स्वयम यो दबावबाट गुज्रन चाहन्न थिएँ । त्यसैले पुरुष बेश्याको सेवा लिँदा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ । दुवै पक्षलाई थाहा हुन्छ कि चाहिएको के हो ? उनी भन्छिन्–अब त महिलाहरु यसकारण पनि यस्ता पेशेवर सेवा हासिल गर्न चाहन्छन् किनभने उनीहरुका साथीले ओछ्यानमा उनीहरुले चाहेजस्तो व्यवहार गर्दैनन् ।
यद्यपि यो चलन कुन स्तरमा छ, यसमा कुनै विश्वव्यापी तथ्याङ्क छैन । तर, जानकारहरुका अनुसार यो चलन बढ्दो छ। ‘अर्जेन्टाइन सोसाइटी अफ ह्युमन सेक्सुअलिटी’ का अध्यक्ष तथा सेक्सोलजिस्ट एड्रियान सैपेटीका अनुसार ‘जति हामीले सोचेका छौ,त्यो भन्दा कयौ गुना व्यापक छ ।’ उनका अनुसार ‘वास्तवमा यसको सम्बन्ध महिलाहरुको नयाँ भूमिकाहरुसँग बढी जोडिएको छ । सेक्स किन्नुको सम्बन्ध शक्तिसँग छ र परम्परागत रुपमा यो पुरुषको मामिला रह्यो । तर अब महिलासँग पनि पैसाको शक्ति आएको छ र उनीहरु स्वयमलाई आनन्द लिने इजाजत दिन सक्दछन् ।’ महिलाहरुको यौन पर्यटनका विषयमा केही फरक फरक समाचारहरु प्रकाशित भएका छन्, जसमा केही महिलाहरु आफ्नो यौन चाहना पूरा गर्नका लागि विदा मनाउन एसिया र क्यारेवियाई मुलुकमा जाने गर्दछन् र मुद्रा वा उपहारका रुपमा भुक्तानी गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
यी महिलाहरु कुन प्रकारको सेवा चाहन्छन्,किन यस्तो चाहन्छन्, उनीहरुको अपेक्षा के हुन्छ, शारीरिक र सेक्सुअल सुरक्षाका लागि के गर्छन्, यो कुरा जान्नका लाग प्रोफेसर सारा किंगस्टनले ‘वुमन हु बाय’ नामक परियोजना सुरु गरिन् । यो एउटा पहलकदमी थियो, जसमा बेलायतमा ती महिलाहरुको सर्व गरियो, जसले यौन खरिद गरिरहेका थिए ।
लैंकस्टर विश्वविद्यालयमा क्रिमिनोलजीका प्रोफेसर किंगस्टनले भने–हामीले पायौ कि यस सम्बन्धमा पत्रिकाहरुको वर्गीगृत विज्ञापनहरु र इन्टरनेटका विज्ञापनहरुको ६३ प्रतिशत हिस्सा महिलाहरुलाई सम्बोधित थियो । उनका अनुसार शोधबाट थाहा भयो कि सन् २०१२ मा पुरुष बेश्याको संख्या ५ हजार २ सय ४६ थियो, जुन यो वर्ष तीन गुना बढेर १५ हजार ७ सय ३२ पुगिसकेको छ। शोधकर्ताहरुले स्पष्ट रुपमा पाए कि महिलाहरु इन्टरनेटमा एजेन्सीहरुमार्फत पेशेवरको खोजी गर्दछन्, जबकि पुरुष परम्परागत तरिका बढी अपनाउँछन् ।
यद्यपि यसको मुख्य कारण हो –सुरक्षा । एक जानकारका अनुसार कुनै पनि अपरिचित व्यक्तिसँग एक रात सम्बन्ध कायम गर्नुको साटो यस्ता एजेन्सीमार्फत सेक्स किन्नु बढी सुरक्षित तरिका हो । उनका अनुसार–यसमा पूर्व ग्राहकको पनि सहयोगीसिद्ध हुने गर्दछ, केही एजेन्सीले पुरुष बेश्यासँग पहिला नै परिचय पनि गराउने गर्दछन्, जुन आमरुपमा चाहन्छन् कि कन्डोमको प्रयोग होस् ।
उनी भन्छन्–जब एउटी युवती पुरुष यौनकर्मीको सेवा लिन्छन् तब उनीहरु साधारण सेक्स चाहँदैनन्, यद्यपि तपाई आफ्नो सीमा बताउन सक्नु हुन्छ । तर तपाईको काम त उनलाई सन्तुष्ट पार्नु नै हो । यो एउटा हृदयहीन संसार हो, जुन पैसाबाट मात्र चल्छ । २४ वर्षीय इभान म्याक्सिकोमा पुरुष बेश्याको काम गर्दछन् र कम्पनीको तर्फबाट उनलाई सबै भुक्तानी गरिन्छ ।
उनी भन्छन्–सेक्स मनलाई शान्त पार्ने एउटा उत्तम तरिका हो । उनले भने–यो त्यही जस्तो हो जस्तो कि हवाई यात्रादेखि डराउने कुनै व्यक्तिलाई यो कति सुरक्षित र आरामदायक छ, त्यसकारण एक दिन भए पनि यस्तो यात्रा त गर्नैपर्छ भनिन्छ । यो बिल्कुल त्यस्तै हो ।३४ वर्षीया सारा एन्डोक्रायनोजलिस्ट हुन् । उनको प्रेमी भए पनि उनले कामुक मालिस गराउने निर्णय गरिन् ।
उनी भन्छिन्–यसमा थेरापिस्ट सहयोगी सावित हुन्छन्, ‘र अन्ततः आफ्नो सेक्सुअलिटीमा आफ्नो अधिकार होस, यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।- बीबीसी हिन्दीबाट